The World Nepal News | कोरोनाले बालबालिकालाई पारिरहेको असर र युवाको भूमिका
संवाददाता | २०७७ भाद्र २८, आईतवार
कोरोना मानव इतिहासमा आएको एउटा डरलाग्दो भाइरस हो । सन् १९१९ को डिसम्बर ३१ का दिन चीनको उहान महानगरीबाट उत्पन्न यस भाइरस अहिले विश्वको १२९ देशहरुमा परालको आगो झै बनेर फैलिरहेको छ । सामान्यतया १८ वर्ष कम उमेरका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई बालबालिका भनिन्छ । यो उमेरमा के सही र गलत भन्ने छुट्याउन क्षमताले भ्याउदैन । मनमा जे आयो त्यही गर्ने प्रवृतिका व्यक्तिहरु प्राय.ं बालबालिका हुन्छन् । भोलिका साझेदार मात्र नभएर आजका आधार नै बालबालिका हुन । सिङ्गो राष्ट्रको वर्तमान अवस्थामा आउने हरेक समस्याको समाधानकर्ताहरु यूवा हुन् । वर्तमानका पहरेदार व्यक्ति नै युवा हुन् । युवा एक व्यक्ति मात्र नभएर आवाज विहिनहरुको आवाज हो । हरेक घटनाहरुलाई समाधान गरी सवल राष्ट्र निर्माण गर्ने क्षमता राख्नै व्यक्ति नै यूवा हून् । हरेक यूवाको हरेक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
प्युठान जिल्लामा कोरोना सक्रमित बालबालिकाहरु ५६ जना रहेका छन् । ती मध्ये ५४ जना निको भएर घर फर्किसकेको र २ जना उपचारार्थ रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानले जनाएको छ । हाल विश्वभरमै फैलिरहेको कोरोना भाइरसले अनाथ, असहाय, अपाङ्ग लगायत अन्य बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा पनि यसले असर पारिहेको हामीहरुलाई अवगत नै छ । हरेक बालबालिकाहरुले औपचारिक रुपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन् । देशमा रहेका सामुदायिक, निजी विद्यालयहरु तथा क्यापसहरुमा क्वारेन्टाइन बनाईएको छ । फलस्वरुप पठनपाठनको मुख्य ढोका नै बन्द भएको छ । शिक्षक र विद्यार्थी एकअर्काका पूरक हुन ।
औपचारिक पठनपाठन नहुदाँ बालबालिकाहरुको पढाइ प्रति रुचि घट्दै गएको छ । नेपालसरकारबाटै विद्यालयमा पठनपाठन नगर्न निर्देशन जारी गरिएको छ । बालबालिकाहरुले शिक्षालाई दिदै आएको पहिलो प्राथमिकता आफ्नो मानसपटलबाट नै खस्किदै गएको बताउछन् । कोरोना भाइरसको स्थिती एकदमै भयानक बन्दै गएकाले यसको सन्त्रासले बालबालिकाहको मनस्थिती मै नराम्रो पर्न गएको छ । जसले गर्दा उनिहरुको मनस्थिती ठीक छैन । शिक्षा पछि अर्को संवेदनशील क्षेत्र स्वास्थ्य हो । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य कर्र्मीहरुले बालबालिकाहरु बिरामी भएको खण्डमा उपचारमा खटिन आनकानी गरिरहेको अवस्था छ । जसले बालबालिकाहरुमा दीर्घकालीन रोग नित्याउनुका साथै मृत्युको मुखमा पुर्याउन थालिसकेको छ । नेपाल जस्तो अल्प विकसित राष्ट्रमा बालबालिकालाई संवेदनशील रुपमा हेरिन छोड्यो भने राष्ट्रले ठुलो घाटा बेहोर्नु पर्ने सत्यलाई वेवास्ता गरिदै छ ।
राष्ट्रले विकासको तीव्र्रता लिन सकिरहेको छैन । फलस्वरुप राष्ट्रले विकासको गतिलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । वेलावेलामा देशको उच्च पदमा रहिरहेको व्यक्तिहरुले नै कोरोना भाईरस हाउगुजी जस्तै गरेर प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । यसलाई विभिन्न मिडियाहरुले अझ नराम्रो तबरले समाचार कभर गरेर प्राचरप्रसार गरिरहेका छन । भनिन्छ ‘बालबालिका काँचो माटो हुन’ , जुन तवरले हामीले सिर्जना गर्छौ त्यहि नै उनीहरुको भविष्यको वास्तविक रुप बन्न पुग्छ । त्यसैले यस्तो संवेदनशील उमेरका हरेक बालबालिकालाई ध्यान नदिएर त्रासको रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेका मिडियाहरुलाई सेन्सरको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । लकडाउन खुल्दा दोस्रो दिनमै घरी परीक्षा सञ्चालनको रुटिङ प्रकासन गर्ने, घरी रद्द गर्ने र घरी लकडाउन गर्ने सिस्टम नै बसालिरहेका छन् , हाम्रो नेपालमा । किन बालबालिकाहरुलाई नजर अन्दाज गरिरहेका छन त ? उनीहरु बालबालिकाहरुको भविव्यमाथि कत्तिपनि चिन्तित नभएकै हो त ?
भनिन्छ, युवा समस्याका समाधानका स्रोत हुन । हरेक समस्या पहिचान गरी समाधानका विकल्प खोज्ने व्यक्तिहरु नै युवा हुन । एउटा युवाकाक्े देशका हरेक क्षेत्रमा सञ्चालन भैरहेका कार्यहरुलाई पारदर्शी बनाउन दबाब दिने, ध्यानाकर्षण गराउने जिम्मेवारी पनि हुन्छ । जसरी अहिले हरेक विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाइन बनाई पठनपाठनमा रोक लगाइएको छ । बालबालिकाहरुका अधिकारहरुको मध्यनजर गर्दै विद्यालय तथा क्याम्पसहरुलाई क्वारेन्टाइन स्थलको रुपमा प्रयोग नगरी सामान्य भौतिक दुरी कायम गर्ने गरी पठनपाठन सन्चालन गर्ने । साथै सरकारले यस अवस्थामा बिद्यालयहरु खुलाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । समुदायस्तरमा धेरै सक्रमण भएको अवस्थामा पठनपाठनको माध्यम विद्यालय बन्द गरेतापनि दूर शिक्षा र प्रविधि अङ्गाल्नुपर्छ ।
विद्युत प्राप्त ठाउँहरुमा भर्चुअल माध्यमबाट अनलाइनमा पठनपाठन गराउनु पर्छ भन्ने बारेमा युवाले सरकारलाई दवाव दिनुपर्छ । अझ अनाथ बालबालिकाहरुको अभिभावकत्व भुमकिा निर्वाह गर्ने कोही हुदैनन् । असहायहरुलाई साहारा दिने कोही हुदैनन् भने अपाङ्गको हौसला बढाउने कोही हुदैनन् । जसले गर्दा उनिहरुममा खिन्नता बोध बढ्दै गएको छ । उनिहरुलाई असल बाटो पहिल्याउन युवाहरुले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । उनिहरु पनि समाजका अन्य व्यत्ति सरह नै हुन् भनेर युवाहरुले अनाथ , अपाङ्ग र असहाय बालबालिकाको हकमा उनीहरुको क्षमता अनुसारको शिक्षा प्रणालीलाई लागू हुनेगरी, उनीहरुलाई सोही अनुसारको शिक्षा प्राप्तिमा सहयोग र हौसला प्रदान गर्न सरकारका तीनै तहलाई ध्यानकर्षण गराउनु पर्छ । जसरी हरेक क्षेत्रबाट त्रास सिर्जना गर्ने, बालबालिकाको मन मस्तिस्कमा चोट पु¥याउने जस्ता कार्य भइरहेका छन् । यसलाई बन्द गराउन विभिन्न तरिका अबलम्बन गरेर सम्बन्धित निकायमा आवाज पुर्याउने कार्य युवाहरुले गर्नुपर्छ । युवाहरुले आफ्ना छोराछोरीको शिक्षाप्रति चिन्तित अभिभावकहरुलाई उहाँहरुको सकृयता बढाइ बालबालिकाहरुको पठनपाठनका कार्य सम्पादन गर्न जिम्मेवारी दिनुका साथै सान्त्वना दिनुपर्दछ । युवाहरुले पढाइ सञ्चालन गर्नका लागि उठाएका कदमहरुपनि प्रति अभिभावकको पनि साथ सहयोग हुने वातावरणको र्सिजना गर्नुपर्दछ ।
कोरोनालाई मुख्य कारण देखाई हाम्रा शैक्षिक सत्रलाई पछाडि धकेल्ने कार्य सरकारले गर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई खबरदारी गरी कडा विरोधमा उत्रिनु सम्पूर्ण युवाको जिम्मेवारी हो । किनभने हामीलाई १ वर्ष पछाडि पार्न खोज्दा हामी धेरै पछाडि पर्ने सत्यलाई मनन् गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । स्वास्थ्य संस्थाबाट बालबालिकहरुको चेकजाँच नगर्ने कार्य गर्ने हस्पिटलहरुका विरुद्ध कडा आन्दोलन युवाहरुले गर्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा आउने समस्या समाधानका विकलल्पहरु खोज्ने कार्य युवाले नै गर्नुपर्दछ । हामी युवाहरुले नै बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवाज उठाउने, विभिन्न सरोकारवाला पक्ष, तिनै तहका सरकार , अभिभावक , विद्यार्थी संघ संगठन , आइ.एन्.जिओ, एन्.जिओ लगायतका क्षेत्रहरुमा वहस र पैरवी गर्न जरुरी छ । विश्व मै लगभग ८० प्रतिशत मनिसहरु लकडाउनमा छन । घरमा बसिरहेका बालबालिकाहरुलाई विभिन्न र्सिजनशील कार्यमा लगाउन युवाहरु र अभिभावकको उत्तिकै गहन भूमिका हुन्छ ।
बाल वचाउ , बाल संरक्षण , बाल विकास र अर्थपुर्ण बाल सहभागीता जस्ता बालबालिकाहरुको अधिकार कार्यान्वयन गराउनमा युवाहरुले योजनावद्ध व्यवस्था गर्न जरुरी छ । आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई आत्मसात गर्दै हामी युवाहरु मर्यादित, अनुशासित , सु.ं सस्कृत , चिन्तनशील ,र्सिजनशील , अध्यनशील भूमिकामा रही सामाजिक रुपान्तरणको संवाहकको रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । त्यसैले विद्यालयका शैक्षिक सामाग्री , फर्निचर , विज्ञान तथा कम्युटर प्रयोगशालाहरु जीर्ण र विनाश रोक्नलाई जोखिम मोलेर भएपनी सक्रिय हुनुपर्दछ । साथै यसको सुरक्षाका निम्ति प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सूचनाहरु सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ ।
असिना , आधिहुरी , तुफान वर्षा सँग भिड्न सफल भएको प्रत्येक फुल्बाट मात्र फल प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै मानिसको जीवनमा चुनौती नआएसम्म विकास हुँदैन भन्ने सत्यलाई आत्मासात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी युवाहरु । सबैको सामुहिक प्रयाशबाट चुनौतिहरुलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । हामी सबै आशावादी हुनुपर्दछ । कोरोनाले केही अप्ठ्यारा र्सिजना गरेतापनि तिनै अप्ठ्यारोबाट पनि अधिकतम् रुपमा फाइदा लिने कसरी त भन्ने बारेमा बालबालिकहरुलाई उपदेश, प्रोत्साहन तथा र्सिजशील कार्यमा अग्रसर गराएर सहयोग गर्नुपर्दछ ताकि वर्तमान कालमा बालबालिकाहरुको यो पुस्ता निराशामा नपरुन भन्ने उदेश्य राखेर हामी सम्पूर्ण युवाहरु एउटै लक्ष्य लिई अगाडि बढ्नुपर्छ ।
२०७७ भाद्र २८, आईतवार प्रकाशित